Ma Minnya Ahotɔ Afe Baako Pɛ
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Toba) Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chuvash Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Guarani Gun Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kabiye Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Macua Malagasy Malay Mam Maya Mixe (North Central) Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Northern Puebla) Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tatar Thai Tigrinya Tojolabal Tok Pisin Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Tswana Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Vietnamese Wallisian Wolaita Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Alain Broggio anom asɛm
AFE A WƆWOO NO: 1971
KAN NO: NÁ ODI NSƐMMƆNE, BU BRABƆNE, SAN NOM NNUBƆNE
Ná me ne m’abusuafo te akuraa bi ase wɔ France atifi fam; wɔfrɛ hɔ Tellancourt. Ná me papa fi France, ɛnna me maame nso fi Italy. Midii mfe nwɔtwe no, yetu kɔtenaa Italy kuro bi a wɔfrɛ hɔ Rome. Baabi a yɛkɔtenae no, na ɛhɔ yɛ ahiafo mu, na na yɛn sikasɛm nkɔ yiye koraa. Eyi nti ɛreyɛ ara ni na m’awofo de ntɔkwaw agyina mu.
Bere a midii mfe 15 no, me maame ka kyerɛɛ me sɛ ɛyɛ a mempue sɛnea ɛbɛyɛ a menya nnamfo. Asɛm no tɔɔ me tirim, enti sɛ mepue a na mentaa mma fie. Anni gyina koraa na mede me ho kɔbɔɔ nnamfo bɔne. Da bi, owura bi a wayɛ ne ho duaburoni brɛɛ me nnubɔne sɛ menom. Mampopo me ti koraa na migyei, efisɛ na mepɛ sɛ obiara hu sɛ menyɛ abofra. Ankyɛ koraa na mekɔdɔm kuw bi a wɔnom nnubɔne na wobu brabɔne. Nkurɔfo amfa me ho ankyɛ me; ná wɔtaa to me mmonnaa. Afei koraa de, na asetena afono me, na na ama me kɔn adɔ owu. Meto m’ani a ɛntɔ obiara anim, na na m’asɛm ayɛ mmɔbɔ. Midii mfe 16 mpo de, anka merekum me ho. Nea ɛbae ne sɛ, menom whiskey akɔtoa baako, na afei mekɔtɔɔ nsu mu sɛ merekum me ho. Nanso manwu, na mmom metɔree mum nnansa.
M’ani so tetew me no, mihuu sɛ nkwa yɛ dɛ, nanso mede me ho hyɛɛ nsɛmmɔnedi ne nnaadaa mu. Ná mema kwan ma nkurɔfo de me kɔ wɔn fie ne me kɔda. Sɛ obi de me kɔ ne fie saa a, mitumi de aduru fra nsã mu ma no nom, na sɛ ɔda hatee a, na mawia no. Nsɛmmɔnedifo akuw akɛse faa me sɛ mentɔn nnubɔne mma wɔn wɔ Italy. Ɛno nti, ɛreyɛ ara ni na makɔka apolisifo aguaa mu, enti na minni ahotɔ. Medanee sansani, na na anidaso nyinaa asa, nanso na migye di paa sɛ da-bi-da-bi ɛbɛyɛ yiye. Mebɔɔ Onyankopɔn mpae sɛ ɔmma minnya ahotɔ afe baako pɛ.
Midii mfe 24 no, mitu kɔtenaa England. Nnubɔne a na metɔn nti, nkurɔfo a me ne wɔn di gua no bi nyae a anka wobekum me. Ansa na merekɔ England no, mekɔsraa me maame, na nea mikohui de, ɛsɛ w’ani. Mikohuu aberante bi a minim sɛ ɔyɛ nsɛmmɔnedifo sɛ ɔne me maame rebɔ Bible mu nkɔmmɔ. Aberante no din de Annunziato Lugarà, * na edin bɔne a na wagye nti, mibisaa no nea ɔrepɛ wɔ hɔ. Ɔkaa nsakrae a wayɛ wɔ n’abrabɔ mu kyerɛɛ me. Ná wabɛyɛ Yehowa Dansefo, enti ɔka kyerɛɛ me sɛ, sɛ mekɔ England a, me ne Adansefo no mmɔ nkɔmmɔ. Mehyɛɛ no bɔ sɛ mekɔ a, mɛyɛ nea waka no. Nanso, mamfa nea ɔkae no anyɛ asɛm; mikoduu England ara na mekɔtoaa m’ahuhubra no so.
Da koro bi mihyiaa Ɔdansefo bi sɛ ɔrekyekyɛ Ɔwɛn-Aban ne Nyan! wɔ London abɔnten so. Ɛhɔ ara na mekaee asɛm a meka kyerɛɛ Annunziato no, enti mibisaa Ɔdansefo no sɛ obetumi ne me asua Bible anaa.
Nea misua fii Bible mu no maa me ho dwiriw me. Bible mu asɛm baako a epusuw me paa ne nea ɛwɔ 1 Yohane 1:9 no. Ɛhɔ ka sɛ: “Sɛ yɛka yɛn bɔne a, [Onyankopɔn yɛ] ɔnokwafo ne ɔtreneeni sɛ ɔde yɛn bɔne befiri yɛn na wahohoro yɛn ho afi nea ɛnteɛ nyinaa ho.” Saa asɛm no pem me paa, efisɛ mehwɛ ɔbra a na merebɔ no a, mihu sɛ me ho ntew. Enti, mantena me to so koraa na mifii ase kɔɔ Yehowa Adansefo adesua wɔ wɔn Ahenni Asa so. Sɛnea Adansefo no gyee me no de, na ɛnyɛ agorɔ koraa. Nea na merepɛ wɔ wiase ara na mikohui wɔ hɔ no; obiara pɛ ne yɔnko asɛm, enti na mepɛ sɛ mede me ho bɔ wɔn.
Nnubɔne ne ɔbrasɛe no, mammrɛ koraa na mitumi gyaee, nanso suban baako bi de, na ayere sɛ megyae; ná mimmu ade, na na minnwen nnipa ho. Ebesi nnɛ nyinaa, suban nketenkete bi wɔ hɔ a merebɔ mmɔden sɛ megyae. Nanso, Yehowa adaworoma nneɛma tumi kɔɔ yiye. Bere a mifii ase suaa Bible no, bɛyɛ bosome nsia na wɔbɔɔ me asu ma mebɛyɛɛ Yehowa Dansefo; afe 1997 mu na mebɔɔ asu.
M’asubɔ akyi no, mewaree ababaa bi a wɔfrɛ no Barbara, na na ɔno nso bɛyɛɛ Yehowa Dansefo nkyɛe. Bere a m’adamfo bi huu nsakrae a mayɛ no, ofii ase suaa Bible. Ɔno nso ne ne nuabea bɛyɛɛ Yehowa Adansefo. Afei, me nana nuabea bi nso fii ase suaa Bible no. Saa bere no, na wadi bɛboro mfe 80, na wɔbɔɔ no asu ansa na ɔrewu.
Ɛnnɛ a merekasa yi, meyɛ asafo mu panyin, na me ne me yere nyinaa de bere pii rekyerɛkyerɛ nkurɔfo a wɔka Italy kasa wɔ London no. Ɔbra a mebɔe nti, ɛtɔ da a me werɛ tumi how paa, nanso Barbara akurakura me abesi nnɛ. Ná merepɛ abusua asetena a anigye ne abotɔyam wom, na na merepɛ Agya a ɔwɔ dɔ. Afei de, nea mepɛ ara na me nsa aka yi. Mesrɛɛ Onyankopɔn sɛ ɔmma me ho ntɔ me afe baako pɛ, nanso nea wayɛ ama me dɔɔso!
Ná merepɛ abusua asetena a anigye ne abotɔyam wom, na na merepɛ Agya a ɔwɔ dɔ. Afei de, nea mepɛ ara na me nsa aka yi
^ nky. 10 Hwɛ asɛm a yɛato din “Me Tuo De, Mankɔ Annya Hɔ Da” Annunziato Lugarà anom asɛm a ɛbae July 1, 2014 Ɔwɛn-Aban mu kratafa 8-9.
Ehia Wo a Nwu
Dɛn na ɛbɛma obi abu owuo sɛ yɔnkoɔ?